गुटको राजनीतिले कांग्रेस लथालिङ्ग भयो : डा. शेखर कोइराला « Name of Truth News : News Portal in Nepal
गुटको राजनीतिले कांग्रेस लथालिङ्ग भयो : डा. शेखर कोइराला
प्रकाशित मिति : २०७८, आश्विन, २६, मंगलवार २०:४४
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले गुटको राजनीतिका कारण कांग्रेस पार्टी लथालिङ्ग भएको बताउनुभएको छ ।
कांग्रेस सभापतिको हैकम र मनोमानीले पार्टीको विधान समेत धूजारधूजा पारेर च्यात्ने काम भएको बताउनुभयो ।
‘कोइरालाले विधानको कुन धारा कतिबेला निलम्बन गरिन्छ वा के थपिन्छ फेसबुक हेरेर थाहा पाउँनुपर्ने अवस्था छ । जिल्ला पिच्छे फरक९फरक नियम बनाएर अधिवेशन गरिएको छ। नेतृत्वमा बसेकाहरु जसरी पनी पार्टी कब्जाको अभियानमा छन।’ बताउनुभयो ।
इतिहासमा कांग्रेसको अधिवेशन प्रहरीको धेराबन्दीमा भएको थाहा नभएको भन्दै सभापतिकै जिल्लामा सुरक्षाकर्मी लगाएर अधिवेशन गरिनु खेदजनक भएको कोइरालाले बताउनुभयो ।
सुन्दरहरैंचा नगर मोरङ्को नव निर्वाचित कार्यसमितिको पदस्थापन एवं शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै कोइरालाले प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशको मिलेमतो र साँठगाँठले लोकतन्त्र खतरामा परेको पनि बताउनुभयो । कोइरालाले लोकतन्त्रको लागि लडेको पार्टी सभापतिले नै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त कुल्चनु अत्यन्तै दुःखद भएको बताउनुभयो ।